Aka Sanitizer, Nhicha Disinfection - Zhongrong
Anyị nwere ike ịnye ngwaahịa ka ：
Ihe eji egbu nje dị n'aka; 75% Mmanya Na-egbu Mmanya; Mhicha mmanya na-aba n'anya; Chemical Raw Ihe (Ethanol na Ethyl Acetate)
N'ime afọ 20 'ahụmahụ lekwasịrị anya na disinfection ụlọ ọrụ dabere na R&D, rụpụta na ahịa, anyị ẹkedori ika TECH-BIO, na anyị nwere mkpebi siri ike ime ka ọ dị ka ndị mbụ ika maka disinfection ụlọ ọrụ na China n'ihi na anyị nwere ndị kasị mma mma nke mmanya nke arụpụtara site na nke anyị osisi.
E nwere ike iji TECH-BIO aka na-ehicha aka na disinfectant n'ọtụtụ ebe ọhaneze dịka ụlọ ahịa ọgwụ, ụlọ ahịa, ụlọ ọgwụ, họtel, ụlọ akwụkwọ, wdg yana ezinụlọ. Ngwaahịa anyị bụ: ethyl ethanol na ethyl acetate nwere ike iji maka ọgwụ ọgwụ, ezi chemical ụlọ ọrụ, wdg
TECH-BIO aka nsacha ihe na disinfectant ma nwere ihe na-arụsi ọrụ ike 75% mmanya nke nwere ike igbu 99,99% ọtụtụ nje na covid-19 iji kpuchido ahụike anyị. Agbakwunyere ngwaahịa anyị pụrụ iche moisturized pụrụ iche ka ọ ghara imerụ anyị aka. Anyị ga na-enye mma na mma na-echebe onwe ngwaahịa maka zuru ụwa ọnụ ahịa.
Ọrụ Ndị Na-egosi
Zhongrong Technology Corporation Ltd (koodu ahia: 836455), ka etolite na 1999 nke bu otu n’ime ulo oru China National High-Tech nke amara na R&D, mmeputa na ahia nke ethanol na-abughi oka ya na ihe ndi ozo. Ọ bụ onye na-emepụta ọka ethanol na-enweghị ọka na China, yana onye na-emepụta acetate kachasị ukwuu na North nke China na North-East China.